Doorashadii xubnaha Aqalka sare ee Gobolada Waqooyi oo maanta baaqatay – STAR FM SOMALIA
Doorashadii xubnaha Aqalka sare ee Gobolada Waqooyi oo maanta baaqatay
Doorashadii xubnaha Aqalka sare ee Gobolada Waqooyi ama Somaliland ayaa maanta dib u dhacday, kaddib markii Guddiga Federaalka ee doorashooyinka dadban uu ku dhawaaqay in cida go’aamin karta waqtiga doorashada ay iyaga yihiin, sidaas darteed aanay jirin wax doorasho ah.
Saraakiil ka tirsan Guddiga doorashooyinka heer Federaal ayaa sheegay in aanay maanta jirin wax doorasho oo isugu jira tan Aqalka Hoose iyo Aqalka sare.
Guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa maalmo ka hor shaaciyay in doorashada xubnaha Aqalka sare ee Somaliland ay dhaceyso 24-ka bishan oo ku beegan maanta oo Sabti ah.
Waxaa uu Guddiga sheegay in la xaliyay cabashadii ka jiray saami qeybsiga xubnaha ka imaanaya Sool iyo Sanaag, isla markaana la qabanayo doorashada.
Labada Guddi ee heer Federaal iyo heer maamul ayaa waxaa ka dhex muuqda inay is khilaafsan yihiin, go’aanadooda ay iska soo hor-jeedaan.
Doorashada xubnaha Aqalka Hoose ee Somaliland ayaa waxaa ka dhiman 17 Xildhibaan, iyadoo la doortay 29 Xildhibaan.
Is qab qabsiga ka taagan doorashooyinka xubnaha Aqalka Sare ayaa waji kale yeeshay, iyadoo siyaasiyiin ka soo jeeda Gobolada Waqooyi oo Muqdisho ku shiray ay sheegeen in aanay ku qanci doonin, wax ka yar %33 oo u dhigma 18 xubnood.
Roobab xoogan oo ka da’ay deegaano abaaro daran ka jireen iyo xoolo u dhintay roobabka
Xildhibaan Cusub oo Maanta lagu Doortay Muqdisho (Daawo Sawiro)